Ny fampiharana rindrambaiko 8 tsara indrindra ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ignatius Room | | Fampiharana iPhone, App store
Ny kinova vaovao an'ny iOS dia manome antsika vaovao fondos de pantalla, ny sasany amin'izy ireo dia miavaka amin'ireo maodely vaovao alefan'ny orinasa eny an-tsena isan-taona. Anisan'ireo rindrambaiko hitantsika mavitrika, raikitra ary velona (vola izay rehefa manery ny hetsika fiampangana efijery). Ireo karazana fiaviana ireo dia tsy mampiseho afa-tsy ny hetsika eo amin'ny efijery hidin-trano amin'ireo fitaovana mifanaraka aminy.
Betsaka ny mpampiasa mankafy mitady sary an-tsokosoko hametrahana azy manokana ho an'ny iPhone, na ekipa baolina kitra tiany izany, ilay sarimihetsika farany hitany tao amin'ny sinema, ny zanany na ny havany, na ny fialam-bolin'izy ireo fotsiny. Ao amin'ny App Store dia afaka mahita fampiharana be dia be isika avelao izahay hanamboatra ny iPhone amin'izao fomba izao. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ireo izay manome anay ny valiny tsara indrindra.
1 Fampiharana rindrambaiko ho an'ny iPhone
1.2 WLPPR - Saripika avo res ho an'ny efijery trano sy hidy
1.3 Vellum - Sary an-tsary sy fiaviana kanto
2 Fampiharana rindrambaiko mivantana ho an'ny iPhone
2.1 Live Wallpapers maimaim-poana
2.2 Live Wallpapers ho ahy
2.3 Live Wallpapers ho an'ny iPhone 6s
2.4 Live Wallpapers ho an'ny iPhone 6s, 6s plus & iLive Pro
Fampiharana rindrambaiko ho an'ny iPhone
Mbola ratsy indray ny doka raha te hankafy maimaimpoana an'ity fampiharana ity izahay afaka manafoana azy ireo amin'ny vidiny 3,29 euro isika. Anisan'ireo sokajy samihafa atolotry Retina Wall antsika fa hitantsika: zavamaniry, abstract - 3D, tanàna - fiainana, firafitra - tsotra (misy ny wallpaper minimalist), sakafo - zava-pisotro, biby, olo-malaza sy kintana, fiara - fiaramanidina, sarimiaina, habakabaka, videogames , fanatanjahan-tena, mozika, lamaody, sarimihetsika, teknolojia, fialantsasatra ...
Mila ny iOS 8.0 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch izy io. Retina Wall dia manana salan'isa antonony kintana 3 amin'ny 5 azo atao.
WLPPR - Saripika avo res ho an'ny efijery trano sy hidy
WLPPR dia manolotra famoriam-bola 10 azontsika idirana aorian'ny fividianana fampiharana, 1,09 euro isaky ny fanangonana 4,49 euro ho an'ny sety iray manontolo, manolotra amina sary miisa 160. Ity rindranasa ity dia manolotra antsika sary zanabolana amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao, manampy votoaty vaovao amin'ireo galeriany isan-kerinandro, mba tsy ho sasatry ny mampiasa ireo sary mitovy.
Mila ny iOS 8.0 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch izy io. WLPPR dia manana salanisa 4,5 kintana amin'ny 5 azo atao.
Vellum - Sary an-tsary sy fiaviana kanto
Vellum dia manolotra antsika sokajy 18 isan-karazany izay ahafahantsika mahita sary an-tsary marobe hanamboarana ny sarin-tsarimihetsika na ny efijery fanidiana na ny efijery an-trano. Vellum dia manome antsika interface minimalist izay ny doka ihany no voakasik'izany izay aseho ao anatiny (azo ampidinina maimaim-poana izy io), dokam-barotra izay tsy azontsika sorohina amin'ny fividianana rindrambaiko ao anaty app.
Mila ny iOS 9.0 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch izy io. Vellum dia manana salan'isa salan'isa kintana dimy amin'ny dimy.
Toy ny rindranasa rehetra asehoko anao amin'ity lahatsoratra ity, ny sary Everpix rehetra dia ao anatin'ny famaha Full HD, mifanaraka amin'ny efijery amin'ny iPhone, iPad ary hatramin'ny Apple Watch. Everpix dia manolotra sokajy 13: Abstract, Nature, Space, Fashion, Animals, Cities, Minimalism, Cartoon, Food, Cars, Sport, Music, Holiday. Raha manana Apple Watch ianao ary manova ny sarin'ny roolinao izay aseho eo afovoany dia Everpix no mailakao, fampiharana azo alaina maimaim-poana miaraka amin'ny doka na $ 0,99 tsy misy doka.
Mila ny iOS 8.0 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, Apple Watch, iPad ary iPod touch izy io. Everpix dia manana salanisa 4,5 kintana amin'ny 5 azo atao.
Fampiharana rindrambaiko mivantana ho an'ny iPhone
Wallpaper mivantana dia mifanaraka amin'ny fitaovana miaraka amin'ny teknolojia 3D Touch ihany, ka amin'ny iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 ary iPhone 7 Plus ihany no azontsika ampiasaina. Raha misintona ireo rindranasa ireo amin'ny fitaovana tsy mifanaraka amin'ity haitao ity ianao dia tsy afaka mankafy sary mihetsika fotsiny, manala ny fahasoavana rehetra amin'ity haitao ity ary mazava ho azy amin'ireo sary.
Ataovy ao an-tsaina fa ireo fiaviana sarimiaina ampiasaina amin'ny efijery hidin-trano ireo fitaovana iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 na iPhone 7 Plus dia ho avy ihany rehefa mikitika ny efijery hidin-trano, raha mbola tsy manana Mode Power Power ambany isika, fomba iray hampiatoana ny ankamaroan'ny effets visuels et ny ankamaroan'ny fizotra mandeha ho azy toy ny fanavaozana ary koa Hey Siri, fanamarinana mailaka mandeha ho azy ...
Afaka misafidy ihany koa isika manaova ny zavatra noforonintsika manokana miaraka amin'ny fakantsarin'ny iPhone misy antsika, raha mbola mifanaraka amin'ny lahasa mivantana izy, ary ampiasao azy ireo ho toy ny sary an-tsoratry ny efijery fanidiana ny fitaovantsika.
Live Wallpapers maimaim-poana
Ny sary an-tsary an-tsary maimaim-poana dia manome sary an-tsary na fiaviana mivantana be dia be ho antsika. Amin'ny maha-rindranasa izay tsy manolotra fividianana rindrambaiko hialana amin'ny doka, dia tsy tokony hialantsika amin'ny dokambarotra izay miseho tampoka ny efijery feno amin'ny endrika horonan-tsary. Ny dokam-barotra dia tena mihoatra ny tampon'ity fampiharana ity, fa raha tsy te handany vola amin'ireto karazana fampiharana hanamboarana ny efijery hidin-tranonkalanay izahay dia io no anjaranao, satria ny vola atolotray anay dia mahavariana, na dia tsy sokajiana sokajy aza izy ireo.
Ny Live Live Wallpapers dia mitaky ny iOS 9.1 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad, ary iPod touch. Tsy manana fividianana fampiharana ianao.
Live Wallpapers ho ahy
Noho io rindrambaiko io dia afaka mamelona ny efijery misy sary miavaka amin'ny biby mihetsiketsika isika, lamina tsy azo ovaina, tanàna, trondro ary na dia fipoahana cosmic aza. Live Wallpapers ho ahy dia mitaky iOS 9.1 na taty aoriana, mifanaraka amin'ny iPhone, iPad sy iPod touch ary Manana salan'isa salan'isa 4 kintana amin'ny 5 azo atao.
Live Wallpapers ho an'ny iPhone 6s
Ity rindranasa ity dia manome antsika fiaviana mihoatra ny 100 mihetsiketsika, izy rehetra dia maka sary tena izy isan'andro. Na dia tsy sary an-tsaina mihitsy aza ilay anarana dia tena tsara ny valiny atolotray antsika maimaim-poana, maha-fampiharana tsy maintsy ananana indrindra raha tsy te-handany vola amin'ireo karazana fampiharana ireo isika. Ny hany tokana, fa ilay afisy nolazaina no mangataka antsika hizara ilay fampiharana amin'ny alàlan'ny kaonty Facebook-nay.
Live Wallpapers ho an'ny iPhone 6s, 6s plus & iLive Pro
Live Wallpapers for iPhone 6s, efa afaka manavao ny lohateny izy ireo, manome sary mivantana an-jatony zaraina amina sokajy maro be toy ny biby, fety, afomanga, voninkazo, habakabaka, timelaps ... Tsy toy ny rindranasa hafa, Live Wallpaper ho an'ny iPhone 6s Asehonao anay matetika ny doka. Azo alaina maimaim-poana izy io, fa raha te hanala azy ireo izahay ary hamaha sokajy misimisy kokoa dia azontsika atao izany ampiasao ny fividianana rindrambaiko izay manana vidiny 3,29 euro.
Live Wallpapers for iPhone 6s, mitaky iOS 9.1 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny fampiharana rindrambaiko 8 tsara indrindra ho an'ny iPhone
Araho ny tsara indrindra amin'ny Giro d'Italia miaraka amin'ny fampiharana ofisialy
Amazon Prime Video dia ho tonga amin'ny Apple TV amin'ny faran'ity taona ity